सिमामा भारतीयले कु’टे, बिराटनगरका कुनै अस्पतालले भर्ना लिन मानेन, ५ दिनपछि निधन! – PathivaraOnline
Home > समाचार > सिमामा भारतीयले कु’टे, बिराटनगरका कुनै अस्पतालले भर्ना लिन मानेन, ५ दिनपछि निधन!
admin September 7, 2020 समाचार, समाज	0
सप्तरी । सप्तरीको नेपाल भारत सीमामा भारतीय नागरिकको कु’टा’ई’वाट एक नेपालीको निधन भएको छ । गत भदौ १६ गते नेपाली माथि भारतीयले कु’ट’पि’ट गरेका थिए । उनको उपचारका क्रममा आइतवार राति निधन भएको हो । यादवकै धानबालीमा भैसी चराएका भारतीय नागरिकले गा’ली गर्दा उल्टै कु’टे;का थिए । सप्तरीको डाक्नेश्री नगरपालिका वडानम्बर ६ औरही निवासी रामदेव यादवको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको धानबालीमा भैसी चराउन भारत बिहारको मधुवनी जिल्ला लौकहीका ७, ८ जना युवक आएका थिए । ६५ वर्षीय यादवको उपचारको क्रममा आइतबार राति बि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता तिलक भारतीले जनाएका छन् । यादवकै धानबालीमा भैसी चराएका भारतीय नागरिकले गा’ली गर्दा उल्टै कु’टे;का थिए ।
यादवले सीमा नजिकैको आफ्नो जग्गामा धानबाली लगाएका थिए । उनको धानबालीमा भैसी चराउन भारत बिहारको मधुवनी जिल्ला लौकहीका ७, ८ जना युवक आएका थिए । बालीमा भैसी चराएको देखेपछि उनली गा’ली गर्दा भारतीयले उल्टै कु’टे’को स्थानियले बताएका छन् । भारतीय समूहले ला’ठी तथा बाँसको भा’टाले हा’ने’का थिए ।
कु’टा’इ’वाट गम्भिर घाइते भएका उनलाई विराटनगरका कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिएनन् । सुरुमा राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा लगिएका उनलाई विराटनगर रेफर गरिएको थियो । तर पाँच दिन सम्म पनि उनलाई कुनै अस्पतालले भर्ना नलिएपछि उपचार नै नपाएर यादवको निधन भएको हो ।
विराटनगरका कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नगरेपछि उनलाई धरानको अस्पतालले भर्ना लिएको भएपनि उपचार गर्न नपाई निधन भएको हो । घटनामा संलग्न एक जना भारतीयलाई भैसी चराउन आएकै अवस्थामा स्थानियले पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका छन् । भैसी चराउन भारत बिहारको मधुवनी जिल्ला लौकहीका ७, ८ जना युवक आएका थिए ।